Ciidamo qabsaday Kastam ku yaalla Magaalada Garowe | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso Ciidamo qabsaday Kastam ku yaalla Magaalada Garowe
Ciidamo Gadoodsan oo ka cabanaya Mushahar la’aan ayaa la wareegay gacan ku haynta Kastam Wasaaradda Maaliyadda Puntland ku leedahay Kantarolka Koofur Galbeed ee magaalada Garowe.
Goob jooge la hadlay GO, ayaa u xaqiijiyay in ciidamadu qabsadeen xarunta iyagoo sheegay inay ka maqan tahay xuquuq isugu jirta mushahar iyo gunnooyin ku maqan dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Cabdiwali Gaas.
Ciidamadan ayaa dhawaan qabsaday xarunta Barlamanka Puntland ee magaalada Garowe, waxayse markii dambe uga tageen wada-hadal iyo ballan qaad ku aadan inay heli doonaan xaqooda.
Arrintan ayaase timid markii Maanta hogaanka ciidanka daraawiishta Puntland, ay sheegeen inay ka maqan tahay xuquuq dhan 30 bilood, waxayna sheegeen in ciidamada gobollada Nugal, Cayn iyo Sool ay yihiin kuwa mudadaas aan mushaharka helin.
Tallaabadan ayaa loo aanaynayaa inay timid markii Barlamanka Puntland iyo dowladduba ka jawaabi waayeen cabashada ciidamada.
Waxaa sidoo kale qabsashada Kastamka wasaaradda Maaliyadda ee Kantaroolka la sheegaya inay timid kadid markii wasiirka wasaaraddaas uu sheegay inaysan jirin xaq ku baaqday dowladda.
Balse Taliyaasha ciidamada oo arrintaas ka hadlayay ayaa ku tilmaamay iska hor keen ku aadan ciidamada iyo hogaankooda, waxayna xuseen inay jirin wax mushahar iyo gunnooyin ah oo heleen muddo Labo Sano iyo Sideed Bilood.
Tan iyo markii Madaxweyne Gaas qabtay talada Puntland, waxaa sare u kacayay cabashada ciidamada iyo shaqaalaha dowladda kadib markii dowladdu bixin weyday mushaharka ciidamada oo ku shaqeeya marxalad adag.
Madaxweyne Gaas ayaa arrimihii uu loollanka ku galay, waxaa kamid ahaa inuu meel saari doono xaqa shaqaalaha isagoo markaas xukuumaddii ka horaysay ku eedaynayay inaysan bixin xaqa shaqaalaha dowladda.
This post has already been read 46724
Previous articleXildhibaan katirsan Barlamanka Puntland oo qarax lala eegtay
Next articleETHIOPIA XISBIGII SIYAASADEED EE AY KU DHEX SAMAYSATAY SOOMAALIYA 1.1. 1991 -8.2.2017